साबधान ! राती सुत्दा भित्री वस्त्र लगाएर सुत्नुहुन्छ ?
एजेन्सी । अधिकांश मानिसहरु जाडोयामको रातमा टाउजर र तातो गर्मी मौसमको रातमा अण्डरवेयर लगाएर सुत्छन् । तर, एक्सपर्ट्स अनुसन्धानकर्ता भन्छन् अण्डरवेयर प्रयोग गरेर सुत्दा तपाईको स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ । एक्सपर्ट्स भन्छन् कि धैरै भन्दा धेरै समय बिना कपडा निवस्त्र सुत्नुस् । बढी भन्दा बढी समय शरीरलाई खुल्ला राख्नुपर्छ । यसबाट इन्फेक्शनबाट बचाउछ । पसिना आउने अंगमा ब्याक्टेरिया किटाणु फैलिने समस्या हुन्छ । खासगरी ती अंगहरु जो सधै कपडाले ढाकिन्छ ।...